Iseluleko sezempilo - iBezzia | Bezzia
Njengoba sibonisile, ezempilo zingukungabi bikho kwezifo kanye nokutholakala kwesimo esihle senhlalo, sezengqondo kanye nesomzimba. Kungakho kusuka eBezzia, sifuna ukukunikeza izeluleko ngezempilo ukufeza lezi zinhloso bese uzama ukumaka izinyathelo zokukubonisa indlela.
Ngokungeziwe kulwazi olumayelana nokudla, imiphumela eyingozi yezimo ezithile noma ukuthi ungazijwayeza kanjani imidlalo kahle, sizogxila ekunikezeni imihlahlandlela yokushintsha izimo zengqondo futhi usebenzise imikhuba enempilo.
Kulesi sigaba ku amathiphu wezempilo Sithemba ukukunikeza umhlahlandlela wokuzinakekela nokuzigcina usesimweni esihle.
Ungabhekana kanjani ne-atopic dermatitis lapho kufika ukwindla
Por UToñy Torres kwenza Izinsuku ze-2 .
Ngokufika kwekwindla nakho kuza nezinkinga ezithile zonyaka ezifana ne-atopic dermatitis. Inkinga yesikhumba ethinta ...
Imithambo ye-Varicose emilenzeni, izeluleko ezi-5 zokuyivimbela
Imithambo ye-Varicose noma imithambo ye-varicose yimithambo evuleka, ikhuliswe, futhi isonteke ngaphansi kwesikhumba. Noma yimuphi umthambo we ...
Uma kukhulunywa ngokudla okunomsoco nokudla, awusoze wathi konke kubhaliwe. Ngoba, ngenhlanhla, zonke izinsuku zenzeka ...
Ukulungiselela Sakusihlwa, izinzuzo zokuhlela imenyu yamasonto onke
Ukuhlela imenyu yamasonto onke kuyindlela engcono yokulawula ukuthi udlani, ukuthi ukudla kanjani nokuthi ...
Uyini umsele we-lymphatic futhi wenzelwe ini?
I-lymphatic drainage yindlela yokwelashwa kwamakamelo efuna ukukhuthaza ukusakazeka kwe-lymph nge ...
Yini i-autophagy futhi yenzelwe ini?
Por UToñy Torres kwenza Amaviki angu-3 .
Ukuthola incazelo yegama elithi autophagy, kufanele useshe phakathi kwamagama esiGreki, ngoba avela ...
Izinzuzo zeminimalism yempilo yengqondo
Izinzuzo ze-minimalism ziningi futhi kungasondelwa kuzo ngokuhlukile kucatshangelwa ubuntu bomuntu ngamunye ...
Amathiphu okuhlala usesimweni ngemuva kwama-40
Por UToñy Torres kwenza Amaviki angu-4 .
Ukuhlala usesimweni ngemuva kwe-40 kuyisihluthulelo sempilo enhle nokugcina uhlelo ...
Amathiphu wokuqinisa amasosha omzimba
Amasosha omzimba aphethe ukulwa namagciwane, amabhaktheriya nazo zonke izinhlobo zamagciwane ezisongela ...
Ingcindezi idala izinwele ezimpunga, kepha ungakugwema
Por UToñy Torres kwenza Inyanga e-1 .
Ukucindezeleka kuyilimaza kabi impilo, noma kuyindlela yemvelo yomzimba womuntu. Unini…
Ingcindezi ikuthinta kanjani impilo yomzimba nengqondo
Ukucindezeleka kuyimpendulo yemvelo yomzimba esimweni esithile, ukusabela kwe-hormonal okuvula ukusabela okuthile ku ...
Ukusetshenziswa okuhle kakhulu kwezokwelapha kwe-peppermint
Izimvukuzane, kufanele wethuke nini?
Umuthi wenuzi, uyini nokuthi wenzeleni